Ihe eji eme ka ndi mmadu megharia ihe ndi mmadu banyere mmadu: Pluck
Ndị na-azụ ihe n'ịntanetị na-ahọrọ ịzụ ahịa na ndị ahịa ha tụkwasịrị obi, na ịkwalite aha ọma kwesịrị ịbụ isi ihe gbasara nkwukọrịta ụlọ ọrụ ọ bụla.
Nyocha ndị ahịa bụ usoro a na-anwale na oge iji wuo ntụkwasị obi nke ika. Nyocha ndị a kwesịrị igosipụta eziokwu na eziokwu nke onye ahịa zụrụ ma nwaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Mana ajuju nde dollar bụ otu esi enweta atụmanya iji kwenye na onye nyocha ahụ bụ n'ezie onye ahịa na-enye nyocha ziri ezi, ọ bụghịkwa onye na-ere ahịa na-ezo ka ịpị mkpọpụta?
Fọdụ ntụpọ gụnyere:
Nye nkọwa gbasara onye nyocha. Ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ịnye ozi kọntaktị zuru ezu, obodo na steeti nyocha ahụ, yana ụbọchị ịzụta, nwere ike iwusi nyocha ahụ ike.
Leverage ike nke mgbasa ozi mmekọrịta. Echiche nke ndị enyi, ma ọ bụ ọbụna ọkachamara ọkachamara maara ihe.
Nye ozi na atụmanya ndị nwere ike inyere ha aka ịkwado nyochaa - ọmụmụ ihe, akwụkwọ ọrụ aka, akwụkwọ ọcha wdg.
Gosiputa nyocha kacha mma na nyocha yiri ya na ntanetị mmekọrịta gị, wee kparịta ya na mkparịta ụka, ntuli aka echiche na mmelite.
Ndị ahịa nwekwara ike iji ngwaọrụ dịka Choo Nyocha, ihe mmekorita ihe mmekorita nke ulo oru iji tinye aka na usoro a.
Nyochaa Pluck ikpo okwu na-achoputa ndi ahia di nma ma choro nzaghachi ha, na-enye ha nhọrọ iji bulite foto na vidiyo. Ikpo okwu a na-ebipụta nyocha ndị a na-akpaghị aka na ọwa ndị ahọpụtara, ma na-enye ndị otu obodo ohere ịza nzaghachi, si otú a na-amalite ịmalite mkparịta ụka mmekọrịta nwere ike ịnyekwuo nghọta maka atụmanya ahụ. Onye na-ere ahịa na-ejigide ike ịme ihe iji hụ na ihe niile na-anọgide na-achịkwa. Onye nyocha ahụ na-enwetakwa nhọrọ ịkekọrịta nyocha na Facebook, Twitter na LinkedIn.
Otú ọ dị, ajụjụ nke ịtụkwasị obi nke nyocha ahụ ka dị. Gbanye Ntụle Nzacha, ihe kensinammuo ngwá ọrụ, nwere ike inyere na. Nkwado nzacha na-enye ohere atụmanya ịlele nyocha iji hụ naanị nyocha ndị sitere na isi mmalite ha tụkwasịrị obi, dị ka ndị enyi Facebook ha, ma ọ bụ ndị ọkachamara ha ji kpọrọ ihe. Maka ndị na-ere ahịa, Pluck na-enye usoro nkwụghachi ụgwọ zuru oke nke na-enyere ha aka ịmata na imepụta nyocha site na ndị ọkachamara ngwaahịa na ndị otu ndị ọzọ nwere mmetụta na obodo ntanetị nwere ike ịtụkwasị obi.
Ndị ahịa nwere ike iji nyocha Pluck maka ebumnuche sara mbara karịa karịa ngwa ọrụ iji bipụta nyocha ndị a na-ekwenye ekwenye. Dịka ọmụmaatụ, ijikọta Nyochaa Pluck na ibe ngwaahịa na weebụsaịtị, ma ọ bụ ọbụna na saịtị micro ọzọ, na-enyere aka melite ogo njin ọchụchọ.
Tags: nyocha ndị ahịaghotanyocha nyocha
Nwee profaịlụ gị n'efu: wepu akaụntụ Twitter gị
Mbanye aka na Wijetị site na Widgetbox